Memory Stick ဖြင့် Window Bootable Stick လုပ်နည်း – Hein Htet Kyaw
Bootable Stick လုပ်ဖို့အတွက် Software တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော့လို ရှည်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Command Prompt ကနေပြီးတစ်ဆင့် လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက် နည်းလမ်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software တွေနဲ့လုပ်ရင်လဲ ရတယ်ဆိုပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် Share ပေးချင်တာကတော့ . . .
အရင်ဦးဆုံး Command Prompt လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Run as Administrator လေးကို လုပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Box လေးမှာ Yes လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင် Command Prompt Box လေးပေါ်လာပြီပေါ့ :3 ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Memory Stick လေးကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Command Prompt box မှာ diskpart လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ Window Built-in ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ diskpart Software ကိုခေါ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ list disk လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ HDD ကော Memory Stick တွေကိုကော Listing လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ select disk * နဲ့ Memory Stick ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ disk2ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ ရွေးလိုက်ဆိုရင် ကျွန်တော့ရဲ့ Memory stick က disk2နေရာမှာရှိနေလို့ပါ။ Memory Stick နေရာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုရင် . . . Size ကိုကြည့်လိုက်ရင် Memory Stick တွေက MB နဲ့ ပြပေးပါတယ်။ အဲဒီလို ရွေးပြီးသွားဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ disk ကို Clean လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ ရိုးရိုးလေးပဲ clean ဆိုတဲ့ command လေးကိုရိုက်လိုက်ပါ။ clean ဆိုရင်တော့ ရှိတဲ့ partition အပြင် data တွေပါ ရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသစ်ပြန်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ create partition primary ဆိုတဲ့ command လေးကိုရိုက်ပေးလိုက်ရင်တော့ partition အသစ်ကို create လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ Memory Stick ကို format ပြန်ရိုက်ပေးဖို့အတွက် format fs=ntfs ကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါ၊ အနောက်မှာ quick ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် ပိုပြီး မြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ Quick Format ချတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ ဒီအဆင့်ထိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Memory Stick ကိုလုံးဝအသစ်အတိုင်း Window Bootable လုပ်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပဲပေါ့။ အဲဒါပြီးရင်တော့ diskpart ကို ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ exit ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ထွက်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Window ISO file ထဲကနေပြီး Memory Stick ကို ကူးယူတဲ့အပိုင်းပါ။ Windows 10 ISO file ကို double click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Window Drive တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာ Software မှ သွင်းမထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ Power ISO လို Ultra ISO လို Software မျိုး သုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ Drive တစ်ခုအနေနဲ့ တက်လာမှာမဟုတ်ပဲ Software သာပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
တက်လာပြီဆိုရင်တော့ XCopy ဆိုတဲ့ command လေးကိုရိုက်ပြီး ကူးလို့ရပါတယ်။ ပုံထဲက အတိုင်း G: ကတော့ Windows 10 ISO ထည့်ထားတဲ့ drive ဖြစ်ပြီးတော့ F ကတော့ memory Stick ကိုပြောတာပါ။ Command အပြည့်အစုံကတော့ XCopy G:\_*.* F:\_ /S ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပြီး တော်တော်ကြာစောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Windows 10 Bootable Stick လေးတစ်ခုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ xD